तपाईँमा ‘मोसन सिकनेस’को समस्या छ भने चिकित्सकको सल्लाह लिनुस् ! « News24 : Premium News Channel
तपाईँमा ‘मोसन सिकनेस’को समस्या छ भने चिकित्सकको सल्लाह लिनुस् !
काठमाडौं, २९ असोज । स्थल, हवाई वा जलयात्रा गर्दा स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या आउँछ । बेचैनी, चिटचिडाहट, रिंगटा र वान्तासम्मको चक्रले यात्रुलाई आलसतालस बनाउँछ । त्यसैले दशैंमा लामो दूरीको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ र सामान्य भाषामा ‘गाडी लाग्ने’ भनेर बुझिने ‘मोसन सिकनेस’को समस्या छ भने चिकित्सकको सल्लाह लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
यात्रा गर्दा शरीरका इन्द्रीय आँखा, कान आदिले सन्तुलित ढंगबाट काम नगर्दा ‘मोसन सिकनेस’ अर्थात यात्राजन्य स्वास्थ्य समस्या हुन्छ । झ्यालबाहिरको दृश्यावलोकन गर्दा यो समस्या बढी हुन्छ । त्यसैले दृष्टि झ्याल छेउछाउका वस्तुमा भन्दा टाढा केन्द्रित गर्नुपर्छ । गाडीको पछिल्ले भागमा बस्दा गतिको अनुभूति बढी हुने भएकाले ‘मोसन सिकनेस’ हुनेहरु सम्भव भएसम्म अगाडि बस्नुपर्छ ।
चिकित्सक ‘गाडी लाग्ने’ व्यक्तिले यात्रा गर्नुअघि ‘प्रोक्लोरपेराजिन’, ‘जेनरिक’ नामक औषधि खान सुझाव दिन्छन् । नियमित औषधि खाने व्यक्तिलाई वाकवाकी अर्थात् ‘मोसन सिकनेस’ बढी हुन सक्छ ।
दुईदेखि बाह्र वर्षसम्मका बालबालिका र गर्भवती, रजस्वला भइरहेका वा हार्मोन लिइरहेका महिलामा ‘मोसन सिकनेस’ बढी हुन्छ । अझ माइग्रेन भएकालाई त यो समस्याले झनै छिटो समात्छ । दशैं वा अन्य बेला यात्रा गर्दा यस्तो समस्या हुन्छ भने एक पटक चिकित्सकसँग परामर्श लिनु उपयुक्त हुन्छ ।